REMEDY Wellbeing * Iyo Yakanyanya Kusarudzika Rehab Munyika
Fonera iyo REMEDY
Mukundi Mukuru : Rehab of the Year 2022. Tichicherechedza basa redu rakasiyana nemamwe, mitengo yekubudirira kwenguva refu, zvivakwa zveumbozha uye kukosha.
Kugadzirisa Hutano hakusi kungotiza kubva muhupenyu hwekushushikana, kushushikana, kupindwa muropa kana kupera simba. Ndiko kudzokera kuhupenyu hwakanaka.
Apo rugged luxury inosangana nerusununguko rwekurapa. Nzvimbo yekubatanidza nechinhu chakakura kupfuura iwe. Nzvimbo yakavanzika kune vane tarenda, vanogadzira, vakashinga uye vane enigmatic kuti vazvibatanidze zvakare. Nzvimbo yekuporeswa kwakanaka kwepfungwa nekwemuviri.
Svika nemoyo wakazaruka, uye siya zvachinja zvachose. Uku kupora uine chinangwa. Nzvimbo ine chirevo. Uyu ndiwo MUDZIDZO
Chirongwa cheRemedy Wellbeing chakasarudzika & World Class chirongwa chinosanganisira kudzoreredza zviitiko zvakaita seyacht yedu yakavanzika, kuredza mapfumo, basa rekufema & mafambiro emhuri kunyika dziri kure, zvese zvakazara muumbozha 5*.
Muhwina Wese: Yakanakisa Luxury Private Rehab 2022
Iwe uri panguva yaunoziva kuti hupenyu hwako hunofanira kuchinja? Uri kutsvaga humwe runyararo, kuzadzikiswa uye pfungwa yechinangwa? Remedy Wellbeing iripo kuti ikubatsire kuwana runyararo zvinoenderana nehunhu hwako hwepamusoro, chero zvingave zvakakosha. Kupa Nyika dzepasi rose marapirwo akasarudzika ehutano hwepfungwa, hwemuviri uye hwepfungwa. Remedy Wellbeing inotsigira nyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira kutsamira, kufunganya, kushaya hope, kushushikana, kupera simba, kushungurudzika, kudzora uremu, orthomolecular kudzoreredza uye kurega kuputa.
Hupenyu Hupfumisa Chirongwa
Executive uye muzvinabhizinesi kuneta kazhinji kunoguma nekurebesa kuzvirapa sekuwedzera manzwiro ekuzviparadzanisa nevamwe, kutya, kufunganya, paranoia uye kuora mwoyo kunowedzera. Kuneta mupfungwa kwakabatana nekuderera kwekuita, kusava nehanya, kushaya simba, kuzvipa mhosva uye kusagadzikana kwekurara zviratidzo zvinowanzoitika.
Kudzoreredza Kubva Mukati
Svika uine pfungwa dzakavhurika, uye siya zvachinja zvachose. Uku kupora uine chinangwa. Nzvimbo ine chirevo. Yakapihwa Luxury Rehab chimiro, uye inozivikanwa nekuda kwemhedzisiro. Isu tinotenda kuti zvinopesana nekupindwa muropa ndiko kubatana. Kubatana pachedu, nevamwe, nenharaunda yedu uye nepasirese.
Award Winning Nyanzvi
REMEDY yakafungidzirwa sechirongwa chinofambira mberi pasi rose. Izvo hazviteveri 12-Nhanho hurumende. Hutano hwakasimba uye hutano hunoda chirongwa chinokurudzira, chakarongedzerwa chega chega chekurapa nekurega kusiri kurairwa kana kudiwa. Remedy inotungamira vatengi kuti vararame hupenyu zvinoenderana nezvavanokoshesa.
Mumwe Mutengi: Imwe Chirongwa
Remedy Wellbeing inohwina mubairo, yakasarudzika mupi wekurapa webespoke wega-on-one kurapwa kwekuneta, kushushikana, kupindwa muropa, kusagadzikana uye kunetseka kwehutano hwepfungwa. Bespoke marapirwo munzvimbo dzakasarudzika uye nzvimbo dzakasarudzika dzakavanzika muNyika.
15 Makore Euchapupu hweSainzi
Our tsika yeDNA bvunzo inobatsira kuona kurapwa kwakasarudzika pane wega. Isu tinoedza mapaneru e69 genes achitsvaga zviratidzo zvekupindwa muropa, kusagadzikana kwepfungwa uye mamiriro epfungwa. Isu tinoongorora anopfuura mazana matatu akatevedzana, makumi maviri nemana neurotransmitters, uye akasiyana mahormone kuti tiite mumwe nemumwe Mushonga Unobatsirwa Kurapa.
Yedu yakatsaurirwa lab bvunzo inoburitsa nyaya dzakaita sekusaenzana kwemaamino acids, kushomeka kwekudya, hypoglycemia, kuzvimba, adrenal kuneta, hutano hwematumbo, mazinga ehomoni uye neurotransmitters. Kurapa kunobvisa uye kugadzirisa kukuvadzwa kunoitwa kuhuropi nemuviri padanho remasero uye kudzivirira zvirwere nezvirwere.
Yakapihwa 'Worlds Best' Status
REMEDY Wellbding yakaverengerwa Nhamba Yekutanga muna 2022 neWorlds Best Rehab uye pasina mubvunzo ndiyo yakasarudzika uye yakasarudzika yekuzorora muNyika. Chirongwa ichi chinogona kusanganisira yakasarudzika chirongwa chekubatanidzazve nemutengi uye mhuri yavo inogamuchirwa mukati meyedu 125ft yacht kuti tifambe nechikepe kune zvemashiripiti zvakatenderedza zvitsuwa zvisina vanhu.
Psilocybin inotariswa nemishonga, Ketamine Infusions uye Ibogaine marapirwo ari pamberi pekurapa kwehutano hwepfungwa uye akaratidzira anoshanda pakurwisa kusagadzikana kwekurapa kushushikana, CPTSD, kufunganya uye kupindwa muropa. Our Luxury Tripnotherapy™ kudzoka kunotungamirwa nekurapa uye kutungamirirwa nekurapa.
Akahwina weWorlds Best Rehab 2022
Remedy Wellbeing yakaverengerwa Nhamba Yekutanga neWorlds Best Rehab Magazine uye pasina mubvunzo ndiyo yakabudirira kwazvo, yakasarudzika uye yakasarudzika ruzivo rweRehab muNyika. Iyo REMEDY ndiko kwaunowana vashandi vakanyanya, vanotungamira-kumucheto ekurapa maitiro & raft yesainzi uye yakazara nzira dzekutsigira uye kumisa varwere kuburikidza nemetamorphosis yekudzoreredza kuzere.
Zviri Kutaurwa Nevanhu
"Iyi Kliniki inoshamisa yakaponesa hupenyu hwangu. Vashandi inyanzvi dzekutengesa uye ndaiziva kuti ndaive mumaoko akachengeteka. Handikwanise kutenda Vese timu paREMEDY nekushandura hupenyu hwangu. Mushonga unoshanda wakandibatsira kuti ndinzwisise kuti chikafu chinokanganisa sei mafungiro angu. Ndatenda REMEDY. Iwe wakakanganisa zvikuru hupenyu hwangu uye bhizinesi."
“Brilliant. Chii chimwe chandichataura. Ndakafunga kuti Rehab yaizoenda kuchiitiko chakaipisisa uye ndaitya. Asi REMEDY yakasiyana zvachose. Chirongwa chepamhepo chakandibatsira chaizvo uye ndakazobhuka vhiki mbiri dzakazara REMEDY nemhuri yangu. Mashoko haatsananguri kutenda kwangu. Makadzorera upenyu hwangu nemhuri yangu.”
"Ndipeiwo hupenyu hwangu"
"Ini ndinosiya REMEDY nhasi mukadzi akasiyana zvachose anogona kuzvitarisa pagirazi, uye ini ndatanga kwete kungofarira asi rudo pachangu. Izvi zvave pasi kune vashandi vanoshamisa. Handikwanisi kukanganisa nzvimbo yacho nenzira ipi zvayo. Management inoita basa rakakosha mukudyidzana nevatengi izvo zvinoita mutsauko mukuru. Ndiri kutarisira hupenyu zvakare"
"Kuchengeta & Professional"
“SaChiremba wePsychiatrist akanyoreswa uye nyanzvi mukupindwa muropa, kusagadzikana kwekudya, uye kurapwa kwekushungurudza, handikwanise kukurudzira REMEDY Wellbeing zvakanyanya zvakakwana. Vashandi vane hunyanzvi uye vane ruzivo vanopa pamusoro nepamusoro mukutsigira vatengi. Ndatumira nhamba yevatengi vangu kuti varapwe inpatient kuREMEDY uye ndichaenderera mberi. "
Yedu Nhau, Zviitiko & Ruzivo Center
Remedy Wellbeing inofara kugovera kufunga kwazvino uye hutungamiriri hwedu hweindasitiri. Chikwata chedu chinowanzo kunzi "nyanzvi dzenyanzvi" uye dzinogara dzichidanwa neHurumende, NGOs, The World Health Organisation nemamwe makiriniki muEurope nePasi rose vachitsvaga kuseta, kugadzirisa uye kushandura kupindwa muropa kwazvino uye mutemo wehutano hwepfungwa.
Bhurocha Redu Rakanaka
Yakapihwa Worlds Best Rehab 2022
Kumbira Kopi Yako
Teerera kune Podcast
Copyright © 2022 neVolania LLC, Inc. All Rights Reserved.